Madaxweynaha Turkiga oo ku dhaleeceeyay wadamada 'Reer Galbeedka' in aysan midnimo u muujin Turkiga markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha Turkiga oo ku dhaleeceeyay wadamada ‘Reer Galbeedka’ in aysan midnimo u muujin Turkiga markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay
July 30, 2016 Puntland Mirror World 0
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhaleeceeyay hoggaamiyaasha Reer Galbeedka in ay ku fashilmeen in ay midnimo u muujiyaan Turkiga markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay, isagoo sheegay dalalka ka walwalsan dambiilayaasha in aysan ahayn saaxiibada Turkiga.
Isagoo ka hadlayay xarunta madaxtooyada Ankara gelinkii dambe ee Jimcada Erdogan ayaa sheegay in hoggaamiyaasha Reer Galbeedka ay dhaleecaynayaan fal-celiska xuukumada Turkiga ee isku-daygii inqilaabkii fashilmay 15 bishan July.
“Markii 10 qof ku dhimato weerar argagixiso, indinka [wadamada Reer Galbeedka] aduunka waxaad ka dhigtaan toogasho,” ayuu yiri.
“Laakiin markii uu dhacay isku-daygii afgembiga dhicisoobay ee looga soo horjeeday Madaxweynaha jamhuuriyada Turkiga, kaasoo mar walba ay difaacayaan baarlamaan ku dhisan hanaan dimuqraadi ah haddana lagu soo doortay 52 boqolkiiba cod bixinta guud, halkii aad dowlada garab siin lahaydeen, waxaad garab siiseen dambiilayaashii.” Ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.
Kadib markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay wadamo badan oo Turkiga saaxiib la ah ayaa sheegay in ay u arkaan dalka, oo hadda ku jira xaalad deg deg ah in ay kusii siyaadayso wadada kaligii-talisnimada.